Amerika Latina · Marsa, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Latina · Marsa, 2013
Tantara mikasika ny Amerika Latina tamin'ny Marsa, 2013
Karaiba 30 Marsa 2013
Mifidy Kandida Ho An'ny Fifidianana Filoham-pirenena Ireo Antoko Mpanohitra Any Panama
Panamà 29 Marsa 2013
Nifidy ireo izay ho kandidà ho an'ny fifidianana filoham-pirenena 2014 ireo antoko politika roa goavana tena mpifanandrina any Panama. Miha-mafana izany ary mitaky fifaninanana avo lenta ny vahoakan'i Panama any amin'ireo vohikalan- tambajotra sosialy.
Fikatonan'ny Google Reader: Toetra Ratsin'ny Google?
Espaina 27 Marsa 2013
Nanambara ny Google tamin'ny herinandro lasa fa hakatony amin'ny 1 Jolay 2013 ny tolotra mpamaky fahana RSS fanomeny, fantatra amin'ny hoe Google Reader. Mandalina ny dikan'ity fanakatonana ity ho an'ilay orinasa sy ho an'ireo mpampiasa azy io ireo mpampiasa miteny Espaniôla.
Bolivia 22 Marsa 2013
Ao anatin'ny Fifanarahana Ramsar, nanendry faritra mando telo vaovao ny governemanta Boliviana ho isan'ny faritra arovana any ‘Llanos of Moxos’, faritra arovana izay manome ny haben'i Pays-Bas sy Belzika mitambatra. Midera ilay fanapahan-kevitra ireo mpikatroka mafàna fo sy fikambanana mpiaro tontolo iainana, no sady manentana ihany koa hiasàna mafy ho fiarovana ny Amazôna.
Però: Fihazohazoana Efa-Taona Ho an'ireo Voampangan'ny Gidragidran'ny ‘Baguazo’
Però 21 Marsa 2013
Volana vitsivitsy sisa dia ho tonga ny tsingerintaona fahaefatry ny zava-nitranga tao Bagua, mbola tsy voavaha ny olana momba ny satan'ireo vazimba teratany 53 voampanga ho nahafaty polisy 12.
Brazila: Asehon'Ireo Olom-Pirenena Tsotra Manao Gazety Ireo Asa Vaventy Tsy Vita Ao An-Tanàna
Brezila 17 Marsa 2013
Nabaribarin'ny tetikasa Amigos de Januária na ireo olom-pirenena Mpanao gazety manao fanadihadihana ao aminà tanàna kely ao Brazila ny tsifahombiazan'ny governemanta ao an-toerana, izay notsinotsinoavin'ireo Mpanao gazety vaventy ao amin'ny firenena, fa nopotehan'ny fandovàna fanaovana hatsirambina ny raharaham-panjakana sy ny tsy fandraisana andraikitra izany ka tsy hahafahana mamita ara-potoana ireo tetikasam-panjakana.
Brezila: Fampahafantarana ny Antoko Vaovao Tarihin'i Marina Silva
Nampahafantarina tao an-drenivohitra Brasilia tamin'ny 16 febroary 2013, tamin'ny anarana hoe “Tambajotran'ny Faharetana” ny antoko politika vaovao najoron’ ny minisitry ny tontolo iainana teo aloha Marina Silva. Olona teo amin'ny 1700 no nanatrika ny fampahafantarana izany Tambajotra izany, anisan'izany ireo mpanohana, mpanangana ny antoko ary ny mpirehan-kevitra, ary manantena ny hoheverina...
Vive Latino 2013: Fahatezàny, Tarika Shiliana Ary Feon'ny Vehivavy
Meksika 17 Marsa 2013
Hahitana ny fandraisana anjaran'i Blur, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes ary ny Panteón Rococó, ankoatra ireo hafa ny fetiben'ny "Vive Latino 2013" (Meksika) . Manolotra anao fomba fijery telo momba izany fetibe izany ny Global Voices.
Arzantina 15 Marsa 2013
Raha niandry ny valim-pifidianana izao ho Papa vaovao izao tontolo izao, efa nanantena ny Arzantina fa olona mpiray tanindrazana aminy no ho voafidy ho Papa. Nanambara ny setroka fotsy nivoaka tao Vatikana fa vita ny fifidianana: zezoita voalohany sy papa Arzantina voalohany, Jorge Bergoglio – izay lasa Fransoà ankehitriny- no...